OST ka PST Ntụgharị. Gbanwee OST ka PST.
Gịnị mere DataNumen Exchange Recovery?
Iweghachite bụ most njirimara dị mkpa nke ihe OST mgbake na OST ka PST akakabarede ngwaahịa. Dabere na ule zuru oke anyị, DataNumen Exchange Recovery nwere ọnụọgụ mgbake kachasị mma, dị mma karịa ndị asọmpi ndị ọzọ n'ahịa!
Mụtakwuo banyere otu DataNumen Exchange Recovery na-ese anwụrụ mpi
Ọ ga-amasị m ịkele gị nke ukwuu maka ịme ka ị nwee ike ịghachite igbe email ị tụlere lost, na DataNume Exchange Recovery
Naanị m chọrọ ịsị ekele maka ịnye mmemme a. M na-eji ya ka ihe ịga nke ọma tọghata a nnukwu OST faịlụ nke na-ekwe ka m gbakee
Site n'ụzọ, anyị nwere ekele maka enyemaka gị. Anyị mere mkpebi nke ịzụrụ Datanumen Exchange Recovery ngwá ọrụ ụnyaahụ, na otu n'ime ihe ndị anyị dabeere
Obi dị gị ezigbo ụtọ! Ugbu a enwere m ike ịnweta ozi kalenda m site na ntọlite ​​ezighi ezi OST kwesịrị inwe
Nke a bụ nnukwu ngwanrọ. Ọ gbakee OST faịlụ oge izizi wee meghee ya na Outlook 2019. Agbalịrịla m 3 ọzọ
ex CIO, lara ezumike nká ugbu a
Aga m akwado ngwaahịa gị nye onye ọ bụla chọrọ
Mgbe nnọchi nke PC nke m, ọ dị m mkpa ịgbake maka ojiji nkeonwe m ochie UST faịlụ na-agbanwe ya na PST. N'etiti ọtụtụ softwares, m nwere
Mgbe ihe karịrị 10 awa nke nọ n'ọrụ oge n'iyi ịkụziri MS na ihe bụ nsogbu bụ mgbe m kwalite m Outlook 2010 ka 2013 na autogeneration nke
Nwere ike 15th, 2015
Ngwọta maka ịgbaso njehie na nsogbu na-agbanwekarị OST File
Emehie nwere ike achọpụtara na faịlụ
Njikwa abụghị faịlụ na-anọghị n'ịntanetị
Na-atụgharị uche OST Nsogbu Faịlụ
Hichapụ Ihe Mgbanwe site na Mmejọ
Main Akụkụ na DataNumen Exchange Recovery v8.5
Nkwado 5.0 gbanwere na 2019.
Nkwado Outlook 97 na 2019 na Outlook maka Office 365.
nkwado OST faịlụ ndị mepụtara Exchange ActiveSync.
Nkwado iji weghachite ozi mail, nchekwa, posts, kalenda, nhọpụta, nzukọ arịrịọ, kọntaktị, nkesa anatara, ihe aga-eme, arịrịọ ọrụ, akwụkwọ akụkọ na ndetu na OST faịlụ All Njirimara, dị ka isiokwu, ka, si, cc, bcc, ụbọchị, wdg, na-natara.
Nkwado iji weghachite ihe ndị agbakwunyere, dịka ozi ọzọ, Excel Worksheets, akwụkwọ Okwu, wdg.
A na-echekwa ihe ndị a nwetaghachiri ma gbanwee na faịlụ nkeonwe (PST) nke Microsoft Outlook na ndị ahịa ozi dakọtara ọzọ ga-enweta.
Nkwado iji weghachite ihe ndị ehichapụ na igbe akwụkwọ ozi Exchange, gụnyere ozi ozi, nchekwa, posts, kalenda, oru, arịrịọ nzute, kọntaktị, nkesa ndepụta, ọrụ, arịrịọ ọrụ, akwụkwọ akụkọ na ndetu.
Nkwado iji tọghata OST ka PST faịlụ ngwa ngwa na rụọ ọrụ nke ọma.
Nkwado iji weghachite 2GB buru ibu OST faịlụ.
Nkwado iji weghachite OST faịlụ buru ibu dị ka 16777216 TB (ntụgharị 17179869184 GB).
Nkwado iji weghachite paswọọdụ echedoro OST faịlụ, ma compressible izo ya ezo na elu izo ya ezo (ma ọ bụ kacha mma izo ya ezo) na-akwado. Na OST Enwere ike weghachite faịlụ ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ịnweghị paswọọdụ.
Nkwado iji wepụta faịlụ PST edoziri na usoro Outlook 97-2002, usoro Outlook 2003-2019, yana usoro Outlook maka Office 365.
Nkwado iji weghachite OST faịlụ faịlụ sitere na faịlụ VMWare VMDK (Virtual Machine Disk) adịghị emebi ma ọ bụ mebiri emebi (*. vmdk), Virtual PC VHD (Virtual Hard Disk) files (*. vhd), Acronis True Image files (*. tib), Norton Ghost faịlụ (*. gho, * .v2i), Windows NTBackup files (*.bkf), ISO image faịlụ (*. Iso), Disk oyiyi faịlụ (*. Img), CD / DVD oyiyi faịlụ (*. Biini), mmanya 120% Mirror Disk File (MDF) faịlụ (*. Mdf) na Nero oyiyi faịlụ. (* .nrg).
Nkwado ịrụzi ma gbanwee OST faịlụ dị na mgbasa ozi rụrụ arụ, dị ka diski diski, Zip diski, CDROM, wdg.
Nkwado ịrụzi na tọghata a ogbe nke OST faịlụ.
Nkwado ịchọta ma họrọ OST faịlụ ndị a ga-arụzi na kọmputa ndị ahịa.
Nkwado mwekota na Windows Explorer, yabụ ị nwere ike ịrụkwa otu OST faịlụ na onodu menu nke Windows Explorer mfe.
iji DataNumen Exchange Recovery tọghata OST ka PST faịlụ
Mgbe ọdachi dakwasịrị na Microsoft Exchange server, dị ka nkesa mkpọka, nkesa nchekwa data nrụrụ, wdg, na Exchange offline nchekwa (.ost) faịlụ na ahịa kọmputa ka nwere ozi ozi na ihe ndị ọzọ niile nke gị Exchange mail akaụntụ. Can nwere ike iji DataNumen Exchange Recovery iji tọghata ndị OST faịlụ na faịlụ PST ka enwere ike ịnweta data n'ime faịlụ ahụ na Microsoft Outlook.
Ọzọkwa, mgbe ị na-ezute dị iche iche na njehie na nsogbu na OST faịlụ, dị ka nrụrụ data, njehie mmekọrịta, ihichapụ ozi ịntanetị na ndudue, buru ibu karịa 2GB OST nsogbu faịlụ, wdg, ị nwere ike iji DataNumen Exchange Recovery ok recovernam data site na OST faịlị na tụgharịa ha na usoro PST.
Cheta na: Tupu itughari OST faịlụ na DataNumen Exchange Recovery, biko mechie ngwa ndị ọzọ nwere ike ịnweta ma ọ bụ gbanwee ya OST faịlụ. Ọzọkwa biko mechie Microsoft Outlook.
Họrọ nke OST faịlụ ka a tọghatara:
Nwere ike itinye ihe na OST aha faịlụ ozugbo ma ọ bụ pịa bọtịnụ na-agagharị na họrọ faịlụ. I nwekwara ike pịa bọtịnụ chọta OST faịlụ a ga-atụgharị na kọmputa mpaghara.
Ọ bụrụ na ịmara ụdị mbipute Outlook OST faịlụ a ga-arụzi, ị nwere ike ezipụta ya na igbe ngwakọta n'akụkụ igbe ọrụ dezie faịlụ, usoro ndị nwere ike ịbụ Outlook 97-2002, Outlook 2003-2010, na Outlook 2013-2019 / Office 365. Ọ bụrụ na ị hapụ usoro ahụ dịka "Ekpebiri Nchekwa onwe", mgbe ahụ DataNumen Exchange Recovery ga-enyocha isi iyi OST faịlụ iji chọpụta usoro ya na akpaghị aka. Agbanyeghị, nke a ga-ewe oge ọzọ.
DataNumen Exchange Recovery ga - echekwa data agbanwere dika faịlị ọhụụ na Ọkpụkpọ Outlook PST ka ị nwee ike iji Microsoft Outlook mepee ma hụ ihe ndị agbanwere. Na ndabara, aha faịlụ ọhụrụ bụ xxxx_recovered.pst, ebe xxxx bụ aha nke isi mmalite OST faịlụ. Dịka ọmụmaatụ, maka isi mmalite OST Isi mmalite faịlụost, faịlụ ndabara gbanwere ga-abụ Source_recovered.pst. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ iji aha ọzọ, biko pịa ma ọ bụ tọọ ya dịka:
Nwere ike itinye aha faịlụ a gbanwere ozugbo ma ọ bụ pịa bọtịnụ na-agagharị na họrọ converted faịlụ.
Nwere ike ịhọrọ usoro nke faịlụ PST gbanwere na igbe ngwakọta n'akụkụ faịlụ a gbanwere edezi, usoro nwere ike ịbụ Outlook 97-2002 na Outlook 2003-2019 / Office 365. Ọ bụrụ na ị hapụ usoro ahụ dịka "Ekpebiri Nchekwa onwe", mgbe ahụ DataNumen Exchange Recovery ga-ewepụta faịlụ PST gbanwere dakọtara na Outlook arụnyere na kọmpụta mpaghara.
pịa bọtịnụ, na DataNumen Exchange Recovery ga start na-agbanwe site na isi iyi OST faịlụ na faịlụ PST. Ogwe ọganihu
Mgbe akakabarede usoro, ọ bụrụ na ọ bụla data nwere ike tọghatara ọma, ị ga-ahụ a ozi igbe dị ka nke a:
Ugbu a ị nwere ike mepee faịlụ PST gbanwere na Microsoft Outlook wee hụ ihe ndị agbanwere. Biko rụba ama DataNumen Exchange Recovery ga-agba mbọ itinye ihe ndị agbanwere na folda mbụ ha. Agbanyeghị, maka lost & chọta ihe, a ga-enwetaghachi ha ma tinye ya na folda pụrụ iche dịka Recovered_Group1, Recovered_Group2, wdg.
Spanish, French, German, Italian, Portuguese, Russian, Japanese, Korean na Simplified Chinese.
DataNumen Exchange Recovery 7.8 weputara na Disemba 10th, 2020
DataNumen Exchange Recovery 7.6 weputara na October 31th, 2020
DataNumen Exchange Recovery A na-ahapụ 7.5 na August 19th, 2020
DataNumen Exchange Recovery A tọhapụrụ 7.2 na June 21, 2020
DataNumen Exchange Recovery A na-ahapụ 7.1 na February 8th, 2020
DataNumen Exchange Recovery 6.9 weputara na October 3th, 2019
DataNumen Exchange Recovery A na-ahapụ 6.8 na July 8th, 2019
DataNumen Exchange Recovery A na-ahapụ 6.5 na Jenụwarị 24th, 2019
Nkwado Exchange Server 2019 na Outlook 2019.
DataNumen Exchange Recovery A na-ahapụ 6.0 na November 12th, 2018
Inyekwu njikwa na log mgbake.
DataNumen Exchange Recovery A na-ahapụ 5.6 na Septemba 21, 2018
DataNumen Exchange Recovery A na-ahapụ 5.5 na Eprel 28, 2018
Nkwado Exchange Server 2016, Outlook 2016 na Office 365.
DataNumen Exchange Recovery A na-ahapụ 5.0 na July 29th, 2015
Nkwado idozi "Enweghi ike ịmegharị ihe ndị ahụ" njehie OST faịlụ.
DataNumen Exchange Recovery A tọhapụrụ 4.5 na June 12, 2014
Nkwado iji weghachite Outlook 2013 OST faịlụ.
DataNumen Exchange Recovery 4.0 wepụtara na Eprel 29, 2014
Nkwado iji weghachite OST faịlụ faịlụ sitere na faịlụ VMWare VMDK (Virtual Machine Disk) na-emebibeghị (* .vmdk), Virtual PC VHD (Virtual Hard Disk) faịlụ (* .vhd), Acronis True Image files (* .tib), Norton Ghost faịlụ (* .gho, * .v2i), Windows NTBackup files (*.bkf), ISO image files (* .iso), Disk image faịlụ (* .img), CD / DVD oyiyi faịlụ (* .bin), mmanya 120% Mirror Disk File (MDF) faịlụ (* .mdf) na Nero oyiyi faịlụ. (* .nrg).
DataNumen Exchange Recovery 3.5 wepụtara na Jenụwarị 20, 2014
DataNumen Exchange Recovery A tọhapụrụ 3.0 na August 12, 2010
Na-akwado Microsoft Exchange 2010 na Outlook 2010.
DataNumen Exchange Recovery A tọhapụrụ 2.5 na March 24, 2010
DataNumen Exchange Recovery A tọhapụrụ 2.0 na Disemba 29, 2008
Na-akwado Microsoft Outlook 2007 na Exchange 2007.
DataNumen Exchange Recovery 1.1 wepụtara na Nov 10th, 2006
Akwado ọtụtụ elu mgbake ụzọ.
DataNumen Exchange Recovery A tọhapụrụ 1.0 na Jenụwarị 1st, 2006
Ike ngwá ọrụ na-agbake ụmụ mgbei ma ọ bụ rụrụ arụ Microsoft Exchange offline nchekwa (.ost) faịlụ